जापानी साथी बनाउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु | Nepali In Japan
सन् २०१४ को अगष्टमा जापानमा आउँदा आफू बस्न गइरहेको जापानी समूदायमा आफुलाई पूर्ण रुपमा घुलमिल गराउँछु भन्ने अटुट विश्वासका साथमा आएको थिए ।
हुन त मलाई पटक पटक यही भनिएको थियो कि ‘तैले कहिले पनि जापानी मासिहरुलाई आफ्नो साथी बनाउन सक्दैनस्,’, ‘त जापानमा सधैं बाहिरिया नै हुन्छस्,’ आदि आदि । मलाई यो कुरामा विश्वास गर्न सधैं गाह्रो नै भयो । हुन पनि हामीहरु सबै मानव नै त हौं, होइनौं त ? त्यसो भए जापानमा साथी बनाउने कुरा यति धेरै गाह्रो किन हुने होला ?
जापानमा यत्तिका बर्ष बसेपछि जापानबारे मेरो कयौं सोचाइहरु परिवर्तन भइसके । जापानमा साथी बनाउन अन्य देशको भन्दा खासै धेरै फरक थिएन । यो भनिरहँदा मैले आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरेको छु ।
जापानमा बसिरहेका हामी कयौं गाईजिन (विदेशीहरु)यस मामिलामा विभाजित छन् । मेरो व्यक्तिगत अनुभवले पनि यही भन्छ कि तपाइ जापानी नभए पनि तपाईले जापानी मानिसलाई साथी बनाउन सक्नु हुन्छ । तर तपाईं कहाँ बस्नु हुन्छ वा कहाँ काम गर्नु हुन्छ यो कुराले तपाईले नयाँ साथी बनाउने कुरालाई प्रभावित बनाउन सक्छ । पक्कै पनि यो कुरा संसारको जुनसुकै ठाँउमा पनि लागू हुन्छ ।
तपाई टोकियो जस्तो व्यस्त शहरमा बस्नु हुन्छ भने शुरुमा साथी बनाउन अलि धेरै गाह्रो हुन सक्छ । तर त्यस्ता ठूला र शहरमा नयाँ मानिस भेट्न र साथी बनाउन क्लब, मिटअप्स जस्ता धेरै तरिकाहरु छन् ।
पश्चिमा वा अन्य संस्कृतिका तुलनामा जापानी संस्कृति अलि ‘रिजर्भ्ड’ छ । यो कुरा तपाईले बुभ्mन जरुरी छ । यसले शुरुमा कुरा अलि अप्ठयारो बनाउन सक्छ । तर तपाईले शुरुमा अलि धेरै प्रयास गर्नु जरुरी छ ।
जापानी काम गर्ने संस्कृति
कार्यालयका सहकर्मीहरुलाई साथी बनाउन खोज्दा सोच्नु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यहाँ काम गर्ने संस्कृति विल्कुल फरक छ । मेरो अनुभवमा अन्य देशका तुलनामा जापानमा मानिसहरु कार्यालयमा कम सामाजिक हुन्छन् । हरेक कुराको समय र ठाउँ हुन्छ । सहकर्मीहरुसँग सामाजिक हुने समय भनेको नोमिखाई अर्थात काम सकिएपछिको ‘ड्रिङ्किङ पार्टी’ हो ।
नोमिखाई भनेको त्यस्तो समय हो जहाँ सबै सहकर्मीहरु मेलेर एक अर्कासँग कुराकानी गर्छन् । कामका बेलामा यस्तो स्वतन्त्र भएर जापानीहरु कुराकानी गर्दैनन् । यसमा एउटा शब्दावली पनि छ ‘नोमिकेशन’ । नोमिकेशन नोमि अर्थात् पिउने र कम्युनिकेशन अर्थात् कु्राकानी मिलेर बनेको शब्द हो ।
नोमिखाई आफ्ना सहकर्मीहरुसँग मिलजुल गर्ने राम्रो तरिका हो । तर नोमिखाईमा भएको कुरा नोमिखाईमै सीमित रहने जस्तै देखिन्छ । जापानमा नोमिखाईमा पिउँदा मानिसको व्यक्तित्वमा व्यापक परिवर्तन आउँछ । रमाइलो पनि हुन्छ । तर भोलिपल्ट कार्यालयमा अघिल्लो रातबारे कुरै हुँदैन । थाहा नपाएझैं गर्छन् ।
तर डर मान्नु पर्दैन । शुरुमा नोमिखाईले साथी बनाउन खासै मद्दत नगरेको जस्तो देखिएपनि यसले विस्तारै नयाँ मित्रताको बाटो भने बनाउँछ ।
अंग्रेजी भाषामा निषेध
जापानमा अंग्रेजी भाषा बोलेर साथी बनाउन निकै कठिन छ । तपाईको मातृ भाषा बाहेक अन्य भाषामा बोल्न जो कोहीलाई पनि शुरुमा गाह्रो हुन्छ । जुनुकै ठाउँमा यही हुन्छ । अंग्रेजी भाषा चुनौतीपूर्ण लाग्ने जापानीहरुका लागि त यो झन गाह्रो हुन्छ । यो किनभने जापानीहरु आफ्नो सांस्कृति उत्कृष्ट भएकोप्रति निकै गर्व गर्दछन् । उनीहरुको अंग्रेजी त्यति राम्रो छैन । यो कुरा अरु कसैले थाहा नपाउन् भन्ने उनीहरुको ध्येय हुन्छ । आफुले बोल्ने कोशिश गर्दा राम्रो आउँदैन कि भनेर उनीहरु बोल्दै बोल्दैनन् ।
यसबाहेक पनि, कयौं जापानीहरुले अंग्रेजी भाषा राम्ररी पढ्न र लेख्न सक्छन् । जुनियर हाइ स्कुल देखि नै अंग्रेजीलाई अनिवार्य विषयका रुपमा पढाइन्छ । तर हालैका वर्षहरुसम्म अंग्रेजी सिकाई पढाई र लेखाईमा मात्रै सीमित थियो, बोलाईमा थिएन । यस्तो खालको सिकाईले गर्दा आफ्नो काम गर्ने समयमा जनसंख्याको ठूलै हिस्सा अंग्रेजी बोल्न हिच्किचाउनु सामान्य नै हो ।
अहिले भने जापानमा अंग्रेजी प्राथमिक तहमै पढाउन थालिएको छ । अहिले बोल्ने सिपमा पनि धेरै जोड दिन थालिएको छ । अहिले प्राथमिक तहमा भएका बालबालिकहरु जवान हुँदासम्म जापानमा अंग्रेजी भाषाको पोख्तता छुट्टै स्तरमा पुग्नेछ । यसले जापानभर दैनिक जीवनमा पार्ने प्रभाव हेर्न अलि समय लाग्नेछ ।
अहिलेका लागि जापानीमा नै केही बोल्ने प्रयास गर्नु होला । यस्तो बानीलाई निकै धेरै मन पराइन्छ ।
यात्रा गर्ने मानिसहरु
हालैका दिन देखिएको एउटा रोचक कुरा के हो भने बारम्बार यात्रा गरिरहने जापानीहरु, चाहे विदेशमा होस् वा स्वदेशमा, उनीहरु विदेशीहरुसँग मित्रता गर्न अग्रसर हुन्छन् । मैले यो कुरा महसुस गरेको छुँ । यात्रा गर्नेहरुले विभिन्न पृष्ठभूमिका अनेक मानिसहरुको सम्पर्कमा आएको र अनुभव गरेकोले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । मलाई लाग्छ कि यसैले गर्दा उनीहरु जापान बाहिरका मानिसहरुसँग मित्रता गर्न अलि बढि खुलेका हुन् कि ।
अनि मेरा केही सहकर्मीहरु जो जापान बाहिर वा जापानभित्रै पनि खासै धेरै घुमघाम नगर्नेहरु पनि मेरो अनुभव सुन्नका लागि मसँग कुराकानी गर्छन् । उनीहरुसँग कुराकानी गर्दा मलाई यस्तो लाग्छ कि उनीहरु पनि आफ्नो भन्दा भिन्न जीवनशैलीबारे जान्न अनि बुभ्mन चाहन्छन् । तर आफैंले यसको अनुभव लिनभने अलि अनिच्छुक हुन्छन् ।
जापानमा साथी बनाउन चाहनु हुन्छ ? यो सबै तपाईमा भर पर्दछ ।
तपाईले जापानमा कसरी साथी बनाउन सक्नु हुन्छ : मेरो सुझाव सरल छः तपाई जस्तो हुनु हुन्छ त्यस्तै रहनु होस् । अनि पहिलो कदम पनि तपाईले नै चाल्नु पर्छ । जापानमा सबै जना तपाईसँग नम्र रहनेछन् । तर तपाई बलियो अर्थपूर्ण सम्बन्ध बनाउन चाहनु हुन्छ भने तपाईले शुरुमा अलि बढी मेहनत गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
कुनै पनि सम्बन्धमा तपाईमा भएका रुचिहरु अरु कसैमा पनि छ कि भन्ने पत्ता लगाउन अलि कठिन नै हुन्छ । जापानमा पनि यसमा खासै फरक छैन । यसका लागि मैले दैनिक रुपमा एउटा उपाय अपनाउने गरेको छुँ, त्यो हो खान्जी पढ्न कतिको गाह्रो छ भन्नेबारे कुराकानी गर्ने । जापानमा सबैजनाले आफ्नो विद्यालयका दिनमा खाञ्जी सिक्न कति दुःख थियो भनेर सम्झन्छन् नै । त्यसैले मैले काञ्जी पढिरहेको छुँ भनेर भन्दा उनीहरुले मेरो दु्ःखलाई आफूले भोगेको दुःखसँग तुलना गर्छन् । अनि विस्तारै कुराकानी अरु विषयमा मोडिन्छ ।
जापानसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्ने कुराकानी शुरु गर्ने अर्को राम्रो उपाय हो । तपाईले यसको प्रश्न थाहा छ भने पनि यसबारे कुराकानी गर्नुहोस् । कुनै बेला समय यस्तो पनि थियो जतिबेला म सहकर्मीहरुलाई ‘……………..लाई जापानीमा के भन्छ ?’ वा ‘……………… मैले सुपरमार्केटमा कहाँ भेट्न सक्छु ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने गर्थे ।
यसको सार के हो भने अरु कसैले तपाईसँग वार्ता शुरु गर्ला भन्ने आश नगर्नुहोस् । पहिलो कदम आफैं चाल्नु होस् – यी सबै कुरा तपाईमा भर पर्दछ ।
जापानमा मेरो बसाईका क्रममा मैले चाखलाग्दा कयौं जापानी साथी बनाएको छुँ । यिनीहरु सबैले म आफैले कहिले पनि पत्ता लगाउन नसक्ने कुरा र विचारहरु म सामु ल्याएर मेरो जीवन धनी बनाएका छन् ।
त्यसैले तपाई जापानमा आउँदै हुनुहुन्छ वा पहिले देखि नै यही बसोबास गरिरहनु भएको छ भने एउटा कुरा सम्झनुहोस् त्यो के भने सांस्कृतिक भिन्नतालाई पाखा लगाउनुहोस् यसमा मानवहरुलाई एकअर्काबाट पअलग राख्ने खासै केही कुरा छैन । हामीहरु जो जहाँ बसेको भएपनि हामी सबैका एउटै आवश्यकता, चाहाना र सामाजिक सम्बन्ध छन् ।
त्यसैले खुला हृदय र सकारात्मक भावनाका साथमा बाँच्नुहोस् अनि तपाई जहाँ गएपनि साथी बनाउन सक्नु हुनेछ ।
Prevयस्तो छ जापानमा याकुजाको इतिहास
Nextरिरेकिशोमा आधारभूत जानकारीहरु कसरी लेख्ने ?